दन्त उपचार केन्द्र : दाँतको सौन्दर्य बढाउने व्यवसाय | Bishow Nath Kharel
दन्त उपचार केन्द्र : दाँतको सौन्दर्य बढाउने व्यवसाय
Posted on December 7, 2012 by bishownath
केही वर्ष अघिसम्म दाँतको उपचार नेपालीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैनथ्यो । अहिले दन्त उपचार केन्द्रमा उपचारका साथै दाँतलाई सुन्दर बनाउने जाने प्रचलन पनि बढेको छ । दाँत कीराले खाने तथा अन्य समस्याको कारण उपचारमा आउने एकथरि सेवाग्राही छन् भने अर्काथरि बिग्रिएको दाँत मिलाउन आउने पनि उत्तिकै छन् । त्यसैले, अहिले यस्ता उपचार केन्द्रमा दाँतसम्बन्धी विभिन्न समस्या लिएर आउने सेवाग्राहीको चाप बढ्न थालेको सम्बद्ध सञ्चालकहरू बताउँछन् । दन्त रोगको उपचार तथा सुन्दरताका लागि उपचार केन्द्र धाउनेको सङ्ख्या अहिले बराबरीजस्तै छ । सर्वसाधारणले दाँतसम्बन्धी समस्याको महत्व बुझ्दै गएकाले पनि दन्त उपचार केन्द्रको व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको समाज डेण्टल हस्पिटलका प्रशासन प्रमुख अजय रेग्मी बताउँछन् ।
दन्त उपचार केन्द्रलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउने काम करीब १० वर्षअघि मात्रै शुरू भएको हो । त्यसअघि महँगो शुल्कका कारण यस्ता उपचार केन्द्रहरू सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर थिए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मुखको रोगको उपचारलाई विश्वको चौथो महँगो उपचारमा राखेको छ । शरीरको प्रमुख द्वार भएकाले मुख एवम् दाँतको रोग जटिल हुने गर्छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालमा गरिने दाँतमुखको उपचारलाई सस्तो मानिन्छ । यूरोपियन देशहरूमा एउटा दाँत फिलिङ गरेको (भरेको) कम्तीमा पनि ५० अमेरिकी डलर पर्ने गर्छ । तर, नेपालमा करीब ५ सय रुपैयाँमा यो सेवा पाउन सकिन्छ । नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयको तुलनामा भने यो शुल्क केही महँगो पर्ने देखिन्छ । हाल नेपालभर करीब ३ हजार दन्त उपचार केन्द्र सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । तर, व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएका डेण्टल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल भने एक दर्जन मात्र छन् । पाँचओटा डेण्टल हाइजेनिक कलेज सञ्चालनमा छन् ।
लुमन्ती डेण्टल क्लिनिकमा अर्थोडेण्टिक उपचार
लुमन्ती डेण्टल क्लिनिकले अर्थोडेण्टिक (तार बाँधी नमिलेको दाँत मिलाउने) उपचार शुरू गरेको छ । क्लिनिकले विगत ३ वर्षदेखि ललितपुरको पाटनढोकाबाट आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त समयमा क्लिनिक सञ्चालन गर्दा १५ लाख रुपैयाँ लगानी भएको सञ्चालक डा. रिना शाक्यले बताइन् । क्लिनिकमा अहिले जटिलबाहेकका सबै खालको दाँतसम्बन्धी उपचार हुने गरेको छ ।
बिहान १० देखि बेलुकी ७ बजेसम्म खुला रहने क्लिनिकमा सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार हरेक समयमा उपचार पाउन सकिने शाक्यको भनाइ छ । तर, यस्तो सुविधा नियमित सेवाग्राहीका लागि मात्र उपलब्ध हुन्छ । बङ्गलादेशबाट बीडीएस तथा अमेरिकाबाट पीओएस कोर्स गरेकी डा. रिनाले मोडल हस्पिटलमा ८ वर्षको अनुभव प्राप्त गरिसकेकी छन् । दाँतसम्बन्धी उपचारका लागि आवश्यक उपकरण क्लिनिकमा उपलब्ध रहेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार नेपाली जनता केही समयदेखि दाँतसम्बन्धी हरेक समस्याको बारेमा सचेत भइरहेका छन् । पहिले समस्या देखिए मात्र परीक्षणका लागि आउने सेवाग्राहीहरू अहिले नियमित परीक्षणका लागि पनि क्लिनिक आउने गर्छन् ।
दाँत स्वस्थ राख्न हरेक दिन दुईपटक दाँत माझ्नुका साथै प्रत्येक ६ महीनामा नियमित परीक्षण गराउनु राम्रो हुने डा. रिना बताउँछिन् । दाँत तथा मुखसम्बन्धी जनचेतना जगाउन क्लिनिकले विभिन्न समयमा हेल्थ क्याम्प पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । क्लिनिकमा अहिले एक डाक्टर र एक हाइजिनिष्टसमेत पाँच कर्मचारी कार्यरत छन् ।
जटिल समस्याका रूपमा लिइने दाँतमुखको उपचारका लागि अहिले बजारमा नयाँनयाँ प्रविधि भित्रिरहेका छन् । यस्ता प्रविधि बढीमा ७ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसकारण पनि दन्त उपचारको लागत महँगो हुन पुगेको हो । दन्त उपचार केन्द्रले व्यावसायिक रूपमा नाफा कमाउने भए पनि त्यसको अधिकांश रकम प्रविधि जडानमा खर्च गर्नुपर्ने सञ्चालकहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय दन्त उपचारसम्बन्धी अधिकांश प्रविधि नेपालमै उपलब्ध रहेकाले विदेश जानुपर्ने बाध्यता भने घटेको छ । दन्त उपचार केन्द्रहरूमा ओठ तथा गिजा मिलाउने, अर्थोडेण्टिक्स उपचार, दाँत कीराले खाएको, दाँत सफा गर्ने, दाँत फिलिङ गर्ने, नयाँ दाँत हाल्नेलगायत गरिन्छ । साथै नयाँ दाँत रोप्ने (डेण्टल इम्प्लाण्ट) सेवा पनि केही दन्त उपचार केन्द्रले प्रदान गर्न थालेका छन् । अहिले नेपालका करीब २५ प्रतिशत जनतामा दन्त उपचार सुविधा पुगिसकेको छ । दन्त उपचार केन्द्रहरूले समयसमयमा गर्ने निःशुल्क दन्त शिविरले पनि यस्ता समस्याबाट प्रभावितलाई धेरै राहत पुगेको छ । एउटा दन्त उपचार केन्द्र सञ्चालनका लागि कम्तीमा १५ चेयर (शय्या) हुनु आवश्यक मानिन्छ । अहिले प्रतिथान चेयरको करीब ४ लाख रुपैयाँ पर्छ । त्यस्तै, अन्य उपकरणहरू पनि आवश्यक हुन्छ । भौतिक पूर्वाधारबाहेक सबै प्रविधिहरू खरीद गर्नुपर्दा एउटा दन्त अस्पतालमा करीब १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आधाजति दन्त उपचार केन्द्र अनुमतिविना सञ्चालित
अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र करीब २ हजार ५ सय दन्त उपचार केन्द्र सञ्चालनमा छन् । तर, झण्डै ५० प्रतिशत दन्त उपचार केन्द्रहरू दर्ता नगरीकन सञ्चालन भइरहेको कान्तिपुर डेण्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टरका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धिमान श्रेष्ठ बताउँछन् । यति ठूलो सङ्ख्यामा विनाअनुमतिका दन्त उपचार केन्द्र सञ्चालन भइरहे पनि नियामक निकायले भने प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उनको गुनासो छ । काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय दन्त अस्पताल तीनओटा चेयर मात्र व्यवस्था गरेर सञ्चालन भएको पाइन्छ । त्यस्तै, यस्ता अस्पतालमा निर्धारण गरेजति दन्त विशेषज्ञ तथा चिकित्सक पनि नभएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अहिले दन्त उपचार केन्द्रमा गैरव्यवसायी हाबी हुन थालेका छन्,’ उनले भने । दन्त चिकित्सकको क्षेत्रलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन सरकारले समयसमयमा अनुगमन गर्नुपर्ने उपचार केन्द्र सञ्चालकहरूको भनाइ छ । सरकारले दाँतसम्बन्धी सामग्रीलाई मेडिकलमा नराखी कस्मेटिक शीर्षकअन्तर्गत राखेकाले पनि दन्त उपचार महँगो हुन पुगेको उनीहरू बताउँछन् ।
ओम समाज चौबीसै घण्टा दाँतको उपचारमा
ओम समाज डेण्टल हस्पिटलले दाँतमुखसम्बन्धी समस्याको चौबीसै घण्टा आकस्मिक सेवा दिँदै आएको छ । अस्पतालले दाँतमुखसम्बन्धी जटिल समस्याको उपचार चौबीसै घण्टा उपलब्ध गराउने प्रशासन अधिकृत कृष्ण घिमिरेले बताए । बाङ्गोटिङ्गो दाँत मिलाउने, मुखभित्रको घाउखटिरा, क्यान्सरजस्ता जटिल प्रकृतिका समस्याको उपचार सुविधा अस्पतालमा उपलब्ध छ । साथै, अस्पतालले अनुहारमा रहेका कोठी, दागजस्ता समस्याको सामान्य औषधि तथा शल्यक्रियाबाट समेत उपचार गर्दै आएको छ ।
कपाल नपलाएका ठाउँमा कपाल रोप्ने, बिग्रिएको ओठलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनेजस्ता उपचार सेवा पनि अस्पतालमा उपलब्ध छन् । दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिबाट उपचार गरिने भएकाले सेवाग्राहीमा विश्वास बढेको अस्पतालका कर्मचारीहरू बताउँछन् । वरिष्ठ सर्जन डा. सुवास घिमिरेको नेतृत्वमा दाँतसम्बन्धी उपचार दिँदै आएको प्रशासक घिमिरेले जानकारी दिए ।
५ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको अस्पतालले त्यसयता विभिन्न स्थानमा २ सयभन्दा बढी निःशुल्क दन्त शिविर पनि सञ्चालन गरिसकेको छ । ५० लाख रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन गरिएको अस्पतालले नैकापमा आफ्नो शाखा पनि खोलेको छ । अस्पतालको आफ्नै ल्याब रहेकाले पनि समस्याबारे छिट्टै जानकारी लिन सकिने घिमिरे बताउँछन् ।
दाँत माझ्नुहोस् ‘ब्ल्युटूथ ब्रस’ले
दाँतका समस्याले ग्रस्त भएका अथवा भविष्यमा निम्तिन सक्ने समस्याका कारण चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि एउटा खुशीको खबर । १ महीनापछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक यस्तो टूथ ब्रसको विक्री शुरु हुन लागेको छ, जसले तपाईंले राम्रोसँग दाँत माझिरहनुभएको छ कि छैन भनेर जानकारी दिनेछ । हो, एक अमेरिकी कम्पनीले ‘ब्ल्युटूथ’ कनेक्टिभिटीयुक्त एक टूथब्रस बजारमा ल्याउने तयारी पूरा गरेको छ । ‘बिमब्रश’ नाम दिइएको यो टूथब्रसबाट दाँतबारे जानकारीहरु लिन स्मार्टफोनको आवश्यकता भने पर्दछ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो स्मार्टफोनमा यो टूथब्रशबाट पाउने जानकारी हेर्न एक ‘एप्लिकेशन’ डाउनलोड गर्नु पर्दछ । तत्पश्चात् बिमब्रशमा रहेको ब्ल्युटूथलाई चालू गर्दै स्मार्टफोनसँग जोडेपछि प्रयोगकर्ताको दाँत मझाइ र मुखभित्रका समस्याबारेका सबै जानकारी स्वचालित रुपमा स्मार्टफोनको डिस्प्लेमा हेर्न सकिन्छ ।
एप्लिकेशनमा रहेको ‘टाइमर’ सेट गरिसकेपछि प्रयोगकर्ताले दाँत माझ्न बिर्सिएको खण्डमा बिमब्रशले नोटिफिकेशनहरु प्रवाह गर्ने गर्दछ । त्यसैगरी प्रयोगकर्ताहरुको दाँत मझाइ ठीक भए/नभएकोबारे सन्देशहरु पनि दिने गर्दछ । निर्माता कम्पनीले दिएको जानकारीअनुसार टाइमरलाई एकपटक सेट गरिसकेपछि दुई मिनेटसम्म ब्रश गर्नुपर्ने सन्देश स्मार्टफोनमा प्रवाहित हुन्छ । त्यतिमात्रै नभई बिमब्रशले दाँतको अवस्था ठीक नभएमा दन्त चिकित्सककहाँ जान सुझाव पनि दिने गर्दछ । टूथब्रशको एप्लिकेशनले दाँत मझाइअनुसार प्रयोगकर्तालाई ‘रेटिङ’ पनि प्रदान गर्छ । विश्लेषकहरुले यो टूथब्रसले मानिसहरुको दाँत माझ्ने व्यवहारलाई परिवर्तिन गर्ने सम्भावना औंल्याएका छन् । उनीहरुका अनुसार दाँत राम्रोसँग नमाझ्ने बालबालिकाका अभिभावकलाई यो उत्पादन एक वरदान नै साबित हुन सक्छ । अभिभावकहरुले यसको प्रयोगबाट आफ्ना सन्तानहरुलाई ठीक समयमा सही ढङ्गले दाँत माझ्न प्रेरित गर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
कम्पनीले बताएअनुसार यसको स्मार्टफोन एप्लिकेशनको आगामी संस्करणमा प्रयोगकर्ताले आफ्नो दाँतका कुन भागलाई बढी ब्रश गर्ने गर्छन् भनेर विश्लेषण गर्ने सुविधा थपिनेछ । साथै, दाँत माझिरहँदा स्मार्टफोनमा मधुर सङ्गीत बजिरहने विकल्प पनि थपिने कम्पनीले बताएको छ । नोभेम्बरमा बजारमा आउने यसको मूल्य ५० अमेरिकी डलर तोकिएको जानकारी कम्पनीले दिएको छ ।
One thought on “दन्त उपचार केन्द्र : दाँतको सौन्दर्य बढाउने व्यवसाय”
Yadavraj Puri. on May 28, 2013 at 9:56 am said:
Nepal Ma Danta Clinic 6yas 6yasti Khule ko Pain6 . Clinic Kholna Ke Kasto Mapdanda Pura Garnu Par6 Hola ? Plz. Suggest Me . On Nepali